Blog-Tipping: Khayaali + Hal-abuur | Martech Zone
Jimco, Juun 6, 2007 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Duane ka Khayaali + Hal-abuur wuxuu ahaa aqriste weyn waana kan iigu horeeya blog-tipee sidaa darteed waxaan ku abaalmarin doonaa talooyin waaweyn oo si fiican loogu habeeyo balooggiisa (oo horeyba u sarreeyay!):
Waa kuwan talooyinkayga ku saabsan bartaada:
Mashiinnada raadinta ayaa runtii jecel inay qiimeeyaan goobaha sare haddii magaca goobta uu la mid yahay magaca domain. Waa mid ka mid ah sababaha boggeygu uusan waligood ugu sarreyn doonin "Suuqgeynta iyo Teknolojiyada"… u dhigmin "douglaskarr". Waxaad heshay domain aad u fiican laakiin magac kale oo blog ah. Waxaa laga yaabaa inaad si uun ugu dari karto "hal abuur" iyo "jarid" hoosaadka balooggaaga (haddii aad rabto inaad sii haysato cinwaanka barta).
Si aad u ilaaliso dadka waawayn, waxaan kugula talin lahaa Qoraalada La Xiriira oo tiirarka la xidhiidha hoos dhig mid kasta oo ka mid ah tiirarkaaga. Qaabkan dadweynahu kaa helo adoo adeegsanaya Mashiinka Raadinta ayaa aqrin doona qoraaladaada oo haddii aysan si sax ah u helin waxay u baahan yihiin, waxaa laga yaabaa inay kudhowaadaan maqaalo dheeri ah oo isla mowduuca ku saabsan. Tani waxay sidoo kale kaa caawin doontaa isku xirnaanta qoto dheer Qiimeynta Mashiinka Raadinta.
Waxaad heysataa labo RSS badhamada u dagaalamaya dareenkeyga. Waxaan rumeysanahay inaad sifiican ugu soo jiidan karto dadkaaga quudintaada adoo adeegsanaya astaamaha aqristaha RSS-ka ee ugu hooseeya dhinaca midig halkii aad ka isticmaali lahayd astaamaha buluugga ah. (Waxaan sidoo kale kugula talinayaa inaad isticmaasho FeedBurner si aad u cabirto quudintaada oo aad ugu darto astaamo dheeri ah, sida macaamiisha emailka)
Qoraaladaadu waa kuwo cajiib ah, kooban oo si fiican loo qoray. Sidoo kale, waxaad leedahay barakada aad ku nooshahay mid ka mid ah magaalooyinka ugu fiican Dunida - Vancouver wali waxay qaadataa # 1, in kastoo. 🙂 Si aad ugu habboonaato qaabka qoraalkaaga oo aad u dhiirrigeliso gurigaaga, waxaan jeclaan lahaa inaan arko adigoo ka hela sawir weyn oo Toronto ah, laga yaabee inuu mashquulka badan yahay habeenki, oo ku dheji taasi waxay leedahay sawir madax ah halka uu ku yaal asalka buluugga weyn. Waxay noolaan laheyd mawduucaaga. Wax la mid ah sawirka ku yaal boggaaga ayaa fiicnaan lahaa - waa farxad, midab leh… waxayna muujineysaa xoogaa buuq iyo sawaxan ah!
Blog Fantastic, Duane! Wax badan ayaan kaa baranaynaa - labadaba waxbarashadaada tooska ah ee Xiriirka Dadweynaha, Suuqgeynta, iyo Jirka iyo shaqada aad hadda la leedahay Hay'addaada Xayeysiinta. Shaki kuma jiro inaad sheekada uqaadanayso heerkii ku xigay!